ပန်ဒိုရာ: 3l0g Day 2009
Posted by pandora at 10:10 PM
ဘာဒေးညာဒေး တော့ မသိပါဘူး အစ်မရာ။ အစ်မညွှန်းတဲ့ အမှတ်တမဲ့နှင်းထဲက ကဗျာဆရာတစ်ဦးကတော့ မင်းတို့ဘလော့ဂ်ဂါ လောကက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။ သတ္တိရှိရင် စာမျက်နှာပေါ် လာခဲ့ကြည့်ပါလို့ စိန်ခေါ်သွားလေရဲ့။ ကိုယ်ကလဲ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ သွားလေးကို မချိဖြဲလေး ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အစ်မညွှန်းသလို ဗေဒင်ပညာဆိုင်ရာ ဘလော့တွေ ညွှန်းဦးမှပဲ။ ကျေးဇူးဗျာ။ ဒီနေ့ဘာဆိုတာ သိရတော့။
ကောင်းတယ်.. အဲလို မျိုးလေးတွေ..အားလုံး လုပ်သင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့..ဖတ်မိတဲ့ အချိန်က.. ၃၁ ရက် ကျော်တော့မယ်မို့.. မလုပ်တော့ပါဘူး။
ဘာတဲ့ အချွန်နဲ့မ ထားတာ
နာမည်ကြိးဘလော့ခ်တဲ့... counter လေးကြည့်
Didn't know about that lovely practice before. Htoo Tay Zar has been doing that and I thot it was his own style. Anyway, focal point like your blog isagood place to introduce new or should-visit blogs. I was one of them which you introduced to your visitors. I kinda like Zizawa. Her style is like K's. A bit of international and current affairs.
ဟုတ်ပ… ကေပြောသလိုပဲ… ဖတ်မိတဲ့ရက်က ၃၁ရက်ကျော်သွားပြီလေ… ညီမလေးမေဓာဝီဘလော့က အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင် အမြဲသွားနေကျပါ… ပန်ညွှန်းတဲ့ ကျန်တဲ့ဘလော့တွေ မရောက်ဖူးသေးဘူး…သွားကြည့်ဦးမယ်…ကျေးဇူးပါပန်…Happy Blog Day!
တို့ကတော့ နောက်မကျသေးလို့ တခုတ်တရနဲ့ လာနှုတ်ဆက်တယ်။
ညီမ ဇီဇ၀ါဘလော့ကတော့ အမြဲဖတ်နေကျ။ တခြားညွှန်းတဲ့ ဘလော့တွေတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ ဆက်ဆက်သွားဖတ်မှာပါ။ အဲဒီလို ညွှန်းတာမျိုး သဘောကျတယ်။ ကျေးဇူး ပန်ပန်။
မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဘလော့လေးတွေပါလို့ 
ညွှန်းတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ
ကျွန်တော်တို့ဘလော့ခ်လေးကို ညွန်းတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကဗျာအနုပညာကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ မပန်ဒိုရာအတွက်လည်း ကောင်းမြတ်ခြင်းဟာ အမြဲတည့်ရှိနိုင်ပါစေ။
ဘလော့ဂ် အညွှန်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ... ကျန်တဲ့ သုံးခုကို မသိသေးပေမယ့် မေဓါဝီနဲ့ ဇီဇဝါ ကိုတော့ ရောက်ဖူးပါတယ်... ဒီနေ့တောင် ဇီဇဝါ့ဆီ သွားလည်လိုက်သေးတယ်...
Thank you Pa Pan... :-))
ဘာနေ့ ညာနေ့ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အထိမ်း အမှတ်နေ့တွေတိုင်း အခုလိုအညွှန်းလေးတွေနဲ့ အသိပေးရင်ကောင်းမယ်။ အလုပ်ပေးတာမဟုတ်။ အပျင်းထူလို့ပါ။ တခါတခါ ဘယ်နေ့က ဘာမှန်းမ သိတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ တခါတခါကိုယ့် မွေးနေ့ တောင် မေ့တေ့တေ့။ :))ကျန်းမာပါစေ။